नेरुडे लघुवित्तले १३ प्रतिशत बोनस शेयर दिने | eDainik Post
पथरी, मोरङ- नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा करिब रु साढे नौ करोड मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
अध्यक्ष भेषप्रसाद धमलाले आव २०७३÷७४ मा बैंकले एक लाख नौ हजार ८१३ घर परिवारमा लघुवित्त सेवा पुर्याइ ७३ हजार ८११ ऋणी सदस्यलाई रु तीन अर्ब नौ करोड ऋण लगानी गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले रु एक अर्ब १३ करोड बचत संकलन गरेको जानकारी दिनुभयो । बैंकले सम्पूर्ण शेयर धनीलाई आव २०७३÷७४ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट ७ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद लाभांश र १३ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने जनाएको छ । बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक मणिकुमार अज्र्यालले बैंकको चुक्ता पूँजी रु ३४ करोड ५७ लाख ८० हजार पुगेको बताउनुभयो ।
मर्मतका लागि मध्यमस्र्याङ्दी आयोजना १० दिन बन्द गरिँदै
काठमाडौँ- सत्तरी मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि दश दिन बन्द हुने भएको छ । आयोजनाको बाँधको बायाँतर्फको क्षेत्रमा भूक्षयलाई रोक्न राखिएको संरचनामा निरन्तर पहिरो खस्ने र बाँधमासमेत क्षति पु¥याउन थालेपछि मर्मत गर्न लागिएको हो । आयोजना यही फागुन १० देखि २० गतेसम्म बन्द गरिन लागिएको हो ।
खुसीकाे खबर, घट्याे सुनकाे भाउ, हेर्नुस् अाज कति छ मुल्य?
काठमाडाैँ- फागुनकाे सुरू देखि नै बढेकाे सुनकाे भाउ अाज भने घटेकाे छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघका अनुसार अाज छापावालमा सुनमा ताेलाकाे सय रूपैयाँ घटेकाे छ भने तेजावी सुनमा पनि ताेलाकाे सय रूपैयाँ घटेकाे छ । अाज छापावाल सुन् ताेलाकाे ५७ हजार ९ सयमा काराेबार भइरहेकाे छ । भने तेजावी सुन ताेलाकाे ५७ हजार ६ सयमा काराेबार भइरहेकाे संघले जनाएकाे छ ।
पोखरा फाइनान्सको हकप्रदमा आवेदन दिने अन्तिम अाज दिन, कतै तपार्इ छुट्नु भयाे की? छिटो गर्नुहोस्
पाेखरा- पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको १५ प्रतिशत हकप्रदमा आवेदन गर्ने दिने समय अाज सकिदै छ । कम्पनीले पुस ३० गते आईतबारदेखि फागुन ६ गतेसम्म एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ९ लाख ८३ हजार ६८२ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो ।
रुकुम- कुनै बेला घर खर्च जुटाउन नसकेर विदेश जाने आकाँक्षा पालेर बसेका रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–३ पोखराका ओमप्रकाश खड्काले अहिले मौरीपालनबाट राम्रो आम्दानी गरिरहनुभएको छ । उहाँले २०६२ सालदेखि मौरी पाल्न शुरु गर्नुभएको हो । मौरीपालनले उहाँलाई सफल उद्यमी मात्र बनाएको छैन वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी पनि दिलाइदिएको छ । बाह्र वर्षअघि एक घारबाट मौरी पाल्न शुरु गर्नुभएका खड्का अहिले रुकुम जिल्लाकै प्रख्यात मौरीपालक कृषकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
सन नेपाल लाइफले ६० करोडको आईपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित पारित भएको छ । संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको प्रथम बार्षिक सााधारण सभाले पारित गरेको हो । अब इन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ ।
खाने हाेइन त जागिर ? वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा १३१ जनालार्इ अवसर
लोक सेवा आयोगबाट सहमति प्रदान भए बमोजिम अस्पताल अन्तर्गत अधिकृतस्तर र सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुमा खुला परिक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले विभिन्न योग्यता पुगेका उमेदवारले अवेदनको लागि दर्ता गर्न सक्ने जनाएको छ ।अस्पतालले रजिष्ट्रार, वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, वरिष्ठ रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट, टेक्नोलोजिष्ट, पब्लिक हेल्थ अधिकृत, जुनियर असिष्टेण्ट, सुपरभाइजर सब ओभरसियर लगायतका पदका लागि अस्पतालले कर्मचारी मागेको हो ।
वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवनले खुला तथा समावेशी गरी १३१ जना कर्मचरीको लागि भर्ना खुलाएको छ । लोक सेवा आयोगबाट सहमति प्रदान भए बमोजिम अस्पताल अन्तर्गत अधिकृतस्तर र सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुमा खुला परिक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले विभिन्न योग्यता पुगेका उमेदवारले अवेदनको लागि दर्ता गर्न सक्ने जनाएको छ ।
मनाेज पुन इन्कान्टर रहस्यः मनोजले हानेको गोली मोटरसाइकलमा, प्रहरीले हानेको गोली छातीमा कसरी ?